Motorola One Action သည်၎င်း၏အသစ်ပြန်ဆိုချက်များတွင်ကြည့်သည် Androidsis
Motorola One Action ကိုပြန်ဆိုထားသောပုံအသစ်များတွင်အပြည့်အ ၀ တွေ့ရသည်
လာမည့် Lenovo terminal ကိုစတင်မည် Motorola ကတစျခုမှာလှုပ်ရှားမှုအရင်တုန်းကပြောခဲ့ဖူးတဲ့စမတ်ဖုန်း၊ မကြာမီမှာအားလုံးသို့မဟုတ်အားလုံးနှင့်အတူဈေးကွက်ထဲမှာဖြန့်ချိတော့မှာပါ။ ကျနော်တို့စုဆောင်းရန်စီမံခန့်ခွဲကြောင်းသတ်မှတ်ချက်များနှင့်အင်္ဂါရပ်များ ယိုစိမ့်မှုအမျိုးမျိုးအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်
ကျနော်တို့က၎င်း၏ဖြစ်နိုင်သောနည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာအပိုင်းနှင့်အနည်းငယ်သောကြောင့်နှင့်အတူဆက်လက်ထိန်းသိမ်းထားလိမ့်မည်အကြံအစည်နှင့်ပတ်သက်။ စကားပြောပေမယ့်ပေမယ့် Motorola ကတစျခုမှာမျှော်မှန်းချက်, ဒီအခွင့်အလမ်းအသစ်အတွက်ငါတို့ဖြန့်ချိသည်နှင့်တစ်ပြိုင်နက်၎င်းကိရိယာတွင်တွေ့ရှိရသောတရားဝင်ဒီဇိုင်းရှိသည်ဟုထင်ရသည်။ အသစ်ကအသေးစိတ်ပြန်ဆို.
91Mobiles Motorola One Action ရဲ့အသွင်အပြင်ကိုဖော်ထုတ်ပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ အောက်ဖော်ပြပါပုံတွင်ဖော်ပြထားသော One Vision သည်၎င်းစက်သည်လက်တွေ့ကျကျတူညီသောဗေဒကိုထိန်းသိမ်းထားသည်ကိုကျွန်ုပ်တို့တွေ့မြင်နိုင်သည်။
Motorola One လှုပ်ရှားမှုပြန်ပေးပါ
အထင်ရှားဆုံးအချက်မှာ၎င်းသည်ဖောက်ထားသည့်အတွက်၎င်း၏ဖန်သားပြင်ဖြစ်သည်နောက်ဘက်ကင်မရာသည်ဒေါင်လိုက်တည့်တည့်ရှိသည့်အိုးတွင်ထားရှိခြင်းဖြစ်သည်။ ဤရှုထောင့်နှစ်ခုသည် Terminal တွင်အထင်ရှားဆုံးဖြစ်သည်၊ သို့သော် selfie ကင်မရာနှင့်မျက်နှာပြင်ကိုကိုင်ထားသောကျဉ်းမြောင်းသောမာဂျင်များအတွက်ရှေ့ panel တွင်ရှိသောရေစက်တစ်စက်၏ပုံသဏ္inာန်အားသေးငယ်သည့်ထစ်ကိုမမေ့စေဘဲ
ပြန်ဆိုချက်များ၏နမူနာတွင် ၆.၃ လက်မမျက်နှာပြင်ပါသည့် FullHD + resolution ဖြင့် 6.3 x 2,520 pixel (1,080: 21)၊ ပရိုဆက်ဆာတစ်လုံးပါ ၀ င်သည့်အသေးစိတ်အချက်အလက်များနှင့်ပါ ၀ င်သည်။ Exynos 9609 Samsung မှ ၃.၄ GB RAM၊ ၆၄/၁၂၈ GB သိုလှောင်မှုနေရာနှင့် ၃၅၀၀ mAh ဘက်ထရီပမာဏရှိသည်။ တစ်ချိန်တည်းမှာပင်၎င်းဖော်ပြချက်ကိုအတည်ပြုပြီးနောက်ဘက်သုံးချောင်းကင်မရာကို3MP ကင်မရာဖြင့်အဓိကအာရုံခံကိရိယာအဖြစ် ဦး ဆောင်သည်။
နောက်ဆုံးတွင်၎င်း၏စျေးနှုန်းနှင့်ရရှိနိုင်မှုနှင့် ပတ်သက်၍ အိန္ဒိယစျေးကွက်တွင်ရူပီး ၁၈,၉၉၉ ကုန်ကျမည်ဟုဖော်ပြထားသည်။ အချို့ ပြောင်းလဲရန်ယူရို ၂၄၀ နှင့်ဇူလိုင် ၁၀ ရက်တွင်စတင်မည်.
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Androidsis ပါ » NOTICIAS » Motorola One Action ကိုပြန်ဆိုထားသောပုံအသစ်များတွင်အပြည့်အ ၀ တွေ့ရသည်
ဂူဂဲလ်ခရုမ်း ၇၆ သည် incognito mode နှင့်အမှောင်စနစ်တွင်တိုးတက်မှုများကိုယူဆောင်လာသည်